Thwebula Easy Cut Studio 5.0.1.1 – Vessoft
WindowsAbanyeEzinye softwareEasy Cut Studio
Ikhasi elisemthethweni: Easy Cut Studio
I-Easy Cut Studio – isofthiwe yokuphrinta, ukuklama nokunquma izinhlobo ezahlukene zehluzo nge-cutter vinyl noma isakhiwo sokusika. Isofthiwe inikeza wonke amathuluzi adingekayo ukudala ihluzo zobuchwepheshe ezifana nezimpawu, izimpawu ze-vinyl, amazwibela noma ihluzo ze-wraps yemoto nokuphrinta kubaningi bezinsimbi noma izakhi ezivela emakethe awaziwayo. I-Easy Cut Studio iqukethe amathuluzi okulandelwa kwesithombe, ukunqunywa kwendwangu, umbhalo nokubunjwa, ukusebenza ngezendlalelo, njll. Isofthiwe ingakwazi ukusika amafonti we-TrueType noma i-OpenType, ukuguqula izithombe zama-raster zibe ukusika nokuthumela ngaphandle noma ukungenisa eziningi zefomethi zefayela. I-Easy Cut Studio inciphisa kakhulu ukubonga nokusika ngokubheka okuhlukahlukeneyo nokuklama kwesikrini esisebukhosini futhi kunika amandla ukulawula isivinini sokusika nokucindezela uma umshini wakho isekela lesi sici.
Ukulawula okugcwele phezu kwe-cutter yakho ye-vinyl
Dweba imiklamo yakho
Ukulandela isithombe nokuvota
Ukuguqulwa kwe-SVG ku-FCM
Thwebula Easy Cut Studio
Amazwana ku Easy Cut Studio
Easy Cut Studio software ehlobene
Isofthiwe ukubuka ividiyo ukusakazwa ngokusebenzisa internet. Futhi isofthiwe kwenza ukuba dala isiteshi sakho siqu ukudlulisa isiqophi inethiwekhi.
Ithuluzi ukuqeqesha abhale asheshise on the keyboard. Isofthiwe iqukethe izindlela ezahlukene ukuthi ezihlukaniswe izifundo ukukhumbula layout ukhiye.
I-Mindomo – isoftware ehlela imicabango kanye nemibono yakho ngendlela yesakhiwo sesihlahla ngenqubo elula yokuphathwa kwemisebenzi.
I-BullGuard Antivirus – isoftware yokulwa namagciwane ivikela ikhompyutha yakho ngesikhathi sangempela ekuhlaselweni kwezinhlobo ezahlukahlukene ze-malware, ukuxhaphaza nokusongela kusuka ku-inthanethi.
Isofthiwe ukwakha passport size izithombe nokwandisa ukuba ezindinganisweni zamazwe ehlukene. Isofthiwe kwenza ukuguqula izithombe singene yohlelo ezidingekayo zokunyathelisa.
Ithuluzi elinamandla ukuhlanza nokwandisa uhlelo. Isofthiwe ikuvumela ukuba uhlanze uhlelo off amafayela okungadingekile kanye aqhube nokususwa okuphelele software.